Willian Ayaa Soo Bandhigay Qaabkii Uu Callum Hudson-Odoi U Qaaday Xanuunka Coronavirus? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Xidiga kooxda Chelsea ee Willian ayaa soo bandhigay qaabkii ay ku ogaadeen in xidiga kooxdiisa ee Callum Hudson-Odoi uu qaaday coronavirus, wuxuuna sidoo kale soo bandhigay go’aanka ay maamulka kooxdiisa Blues siiyeen ciyaartoyda.
Willian ayaa sheegay in lagu amray dhamaan ciyaartoyda kooxda Chelsea in ayna ka soo bixi karin guryahooda ay go’doonka ku yihiin maadaama oo halista coronavirus uu kooxda soo dhex galay.
Dhinaca kale Willian ayaa ka sheekeeyay qaabkii ay ku ogaadeen in xidiga kooxdiisa ee Callum Hudson-Odoi uu qaaday cudurka coronavirus.
Willain ayaa waraysi uu siiyay warbaahinta dalkiisa Brazil ee Esporte Interativo ayaa sheegay labada arimood ee kaliya ee ciyaartoyda kooxda Chelsea loogu ogol yahay in ay guryahooda kaga soo bixi karaan.
Willian oo ka hadlaya amarka ay kooxdiisu ciyaartoyda siisay ayaa yidhi: “Tilmaamaha ay noo soo gudbiyeen waxa uu ahaa in aanan guriga ka bixi karin. Ilaa oo ay jirto baahi wax soo iibsasho ee suuqa iyo pharmacy-ga”.
Willian oo soo bandhigaya in la ganaaxayo ciyaartoyda Chelsea haddii ay guryahooda ka soo baxayaan ayaa yidhi: “Laakiin waajib ayay nagu tahay in aanan guriga ka bixin oo aan meel kale oo nooc kale ah la tagin. Haddii ay kooxdu ogaato wax ay ciyaartoydu u baxayaan, way na ganaaxayaan, taas ayaa ah waxa ay noo sheegeen”.
Intaas kadib Willian ayaa ka hadlay arintii caabuqa corona virus ee Callum Hudson-Odoi oo ay isku koox yihiin wuxuuna yidhi: “Waxaan xusuustaa kulankii axadii aanu la ciyaarnay Everton, isagu wuu dhaawacnaa, laakiin ciyaarta ayuu joogay, ciyaarta ayuu daawanayay, ciyaarta kadib qolka xidhan ayuu nagula jiray anaga”.
Willian oo sharaxaadiisa sii wata ayaa yidhi: “Isniintii maalin fasax ah ayaanu lahayn, waxaanu soo laabanay talaadadii. Kadib markale kamuu soo xaadirin. Talaadadii, arbacadii iyo galabnimadii khamiistii, kumuu soo laaban tababarka. Kadib waxaanu ogaanay in aanu fiicnayn, in uu xanuunsanayo oo uu xumad dareemayo”.
“Waxaan filayaa habeenimadii khamiistii in ay ahayd markii aanu maqalnay in laga helay coronavirus. Sidaa daraadeed, laga bilaabo habeenkii khamiistii, kooxdu waxay nagu wargalisay anaga in aanu guryaha joogno, in aanan guriga ka bixin ilaa war dheeraad ah, taas ayaa ahayd wixii dhacay” ayuu Willian hadalkiisa ku sii daray.
Willian ayaa shaaciyay in qorshaha kooxdiisa Chelsea yahay in isniinta soo socota ay ku soo laabtaan tababarka laakiin waxa uu cadeeyay in ciyaartoy kale oo Chelsea ka tirsani ayna tijaabo marin isla markaana uu Hudson-Odai isagu tijaabada is mariyay.
“Ma jirto cid nooc tijaabo ah ismarisay, isaga oo kaliya ayaa naftiisa tijaabiyay” ayuu Willian ku cadeeyay in ciyaartoyda kale ee Chelsea ayna baadhitaano tijaabo caafimaad ah ka marin coronavirus.